Ụbọchị My Pet » Mgbakwasa N'ihi A mbụ Ụbọchị
site Jerusha Stewart
Mgbakwasa N'ihi A mbụ Ụbọchị
emelitere ikpeazụ: oké osimiri. 27 2020 | 4 min agụ
Anyị na-niile e mesoro a magburu ejiji izu ọjọọ: toro inyom na-ka kwere na ha adịghị nwetara a aidia dị ka ihe na-eyi! Olee otú ọzọ ị pụrụ isi kọwaara ndị proliferation na ewu ewu na nke makeover na ịke ndụmọdụ telivishọn egosi? Anyị na-arahụ anyị na nne shrieking, 'Ị na-agaghị na-ahapụ ụlọ na!’ ka unsuspecting inyom bụrụ ndị na-emepụta ejiji na 'punk'd site na cable ịke egosi. All a unsolicited, ma 24/7 ndụmọdụ nwere anyị abụọ-guessing anyị uwe na ikike anyị nwere ijikere maka na ihe niile na-dị mkpa merenụ: Akpa Ụbọchị. Ma ị mkpa n'ezie a zuru okè uwe ka ọnyà nwa okoro ahụ ụzọ na-esote?
M kwenyesiri ike na uwe na-adịghị eme ka nwaanyị ma ọ bụ mee onye na-ada onyeisi ikiri ụkwụ n'ihi na a na nwaanyị na Manolo Blahniks. M ka na-na-anụ mmadụ na-ekwu 'm dara na ịhụnanya na ya mgbe mbụ m hụrụ ya na Calvin Klein okpomọkụ uwe . . . Ị na-echeta otu, mmanụ aṅụ na-, na buttons ala azụ.’ More yiri ya na-echeta na-tụgharịa na site na ịhụ gị na otu onye n'ime ochie ya button-ala Chiefs.
N'agbanyeghị, M nwere ihe mbụ ụbọchị ahụmahụ na m na nwere òkè m nke suke pawings site na m closets na-achọ 'zuru okè’ ensemble n'ihi na mbụ mgbede si. M na-na-nọrọ afọ edebe di na nwunye na mbụ ha ụdị enyi, na jikọtara na m fashionista gara aga, M gbagote na ụfọdụ na-uche iwu maka a mbụ ụbọchị mgbakwasa ịga nke ọma.
1. Unu na-eyi nwa. Ọ bụ na-ama ọchịchịrị ezu na osisi, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ihe nkiri eleghị anya ị ga ifufe na. Gị ozi bụ kwụpụta, bụghị ngwakọta na gburugburu gị. E wezụga, m unofficial nghoputa nke otu ụmụ okorobịa hụrụ na ha na-agba kpam kpam sikwara ike njite na-agwụ ike.
2. Unu na-eyi gị kaboodu. Nke a abụghị oge oyi akwa ọkacha mmasị gị uwe elu n'okpuru na ọmarịcha sweta nnọọ na ị na-apụghị iguzogide si nnukwu ụlọ ahịa na-ekpuchi ha na ụdọ ígwè na nkume pel. Na na ọtụtụ anya swiiti, gị Ihọd nwere nsogbu figuring ebe na-elekwasị anya. Ị na-agbalị ime ka a àgwà zoo, ọ bụghị 'Project runway.’
3. Unu na-egosi na ihe ọ bụla na-eme ka ị na-ele anya dị ka ị na-ọbọp, gbagọrọ ma ọ bụ ihe e kekọtaworo na mara akpụ. Nke a na-eduga naanị na-ezighị ezi-ụzọ na-eche echiche na ya, dị ka, 'Olee otú ọ ga-esi n'ime nke na-na-elu- . . . na otú m kwesŽrŽ inwe ya nke ọ?’ E wezụga, atụba si hints nke otu onye n'agbụ fantasies bụ ụzọ nke ukwuu ozi na mbụ ụbọchị.
4. Lekwasị anya na-ele anya oké n'elu n'úkwù. Ohere inweta bụ, kasị nke mgbede ị ga-nọdụrụ ala. Wepụta gị ego na-eweta mara mma foto na ọ pụrụ ịhụ. Nye ya ihe ka na-ekwu banyere: a uwe elu nwanyị na a oké agba, a mma-mere top na-egosi na anya gị n'ubu, ma ọ bụ jeweled ọla ntị na enwetaghị ìhè. O nwere ike ọ bụchaghị mara ejiji, ma ọtụtụ ndị ma ihe ha na-amasị na agba na shapes: na na agba na ị, udi nke na uwe elu gị na akụkụ.
5. Nabata agba. Ị adịghị na-eji ejiji na a Technicolor ikwommiri, ma otu obere agba gburugburu ihu gị ga-esi mee ka anya gị na ọnụ ọchị gị na. Ndị ziri ezi na ndò ga-eme ka ị na-ele mmanụ mgbe ị na-eche na-arịa ọrịa ná nri ma ọ bụ ihe ọ na-ekwu. Men n'anya-acha uhie uhie – si ọkụ engine ka cherry tomato na-utu ọgaranya red. Sensuality na sophistication ina na ị na-ahọrọ kwesịrị ekwesị ndò gị na anụ ụda. Ịmụta a mbinye aka ndo. Jiri ọgaranya hue bilie nso na onye.
6. Fit na ito eto. Echegbula onwe gị banyere size. Lekwasị anya kwesịrị ekwesị. Mgbe uwe bụ na ị na o kwesịrị dabara gị na ọ bụghị gị myiyi size. -Adị adị n'ezie: anyị nile nwere akpa anyị achọghị ebu na-apụta na anyị chọrọ ga-tụgharịa pụọ. Ihe dị mkpa bụ ịmụta nkà nke igbanwe na itinye ego na ihe onwunwe gị na. Mgbe na uwe na-dina n'ala, M ekwe nkwa na ị gaghị na-achọ na size na mkpado.
7. Egbu, a mbụ ụbọchị abụghị otu dị ka nnukwu ekpughe. Eji gị mma atụmatụ, ma ọ bụghị ha niile ozugbo. A olulu neckline dịghị mkpa ka mpi na a apata elu uwe. Naa ọzọ bụ. Ndị na-erughị ị na-egosi ugbu a, ihe ị ga nwere maka mesịrị.
Na-ezu ohi A NDỤ: Uwe Abamuru
My enyi Heather-eme Polaroid foto nke onwe ya na ya mmasị mgbanwe. Ọ ngwa ngwa na-ekweta na ya na-ọzọ uwe ya karịa ka o nwere ike na-echeta, otú ahụ ka o rubere a ndekọ nke ya ejiji Ndepụta na ihe anya kacha mma na ya. Mgbe ọ gara zụọ ahịa ọ na-ewe a ole na ole photos tinyere maka mmụọ nsọ na imeru ihe n'ókè. I nwere ike na-ya echiche otu nzọụkwụ n'ihu na categorize ọkacha mmasị gị anya. Rịba ama nke bụ ọkacha mmasị gị ajụjụ ọnụ uwe, detuo nke uwe-eme ka ị na-eche dị ka otu nde ebu na-etinye ọnụ a dream collection of mbụ ụbọchị ekwekọghị.
Lee ụfọdụ style nduzi bụrụ na ị na-agaghị ekweta na ihe gị onwe gị na ejiji savvy. Ọzọkwa, i nwere ike ịhụ ihe Haute Atụmatụ na www.thelastsinglegirlintheworld.com.
Ụlọ ahịa dị ka a pro nọ n'ụwa ejiji n'isi obodo na ebe-eyi 2005 ndị ndú nke ihe dị iche iche obodo: Las Vegas, New York City, Paris, Italy (Florence, Rome, Milan), San Francisco, Los Angeles na London
Television oru omume: ekiri a ole na ole ji nke Gịnị bụghị na-eyi. Ọ bụ na-atọ ọchị na ị nwere ike ịkasi gị onwe gị site na-asị 'na m ga-eyi na!’ Ma na British ma ọ bụ American version ga-enye gị obi ike na-awakpo gị kaboodu na rethink gị ịke.
Ná nrọ na Libro: Olee otú A Good Dog jiwo A Bad Nwanyị
Olee Otú M Pụrụ Zere Kparịtara Nwụrụ Anwụ Mpaghara na-na Site Hapụrụ?
Olee otú iji na-adọta ndị Nwanyị nrọ gị
Top ise Online dịwara Safety Atụmatụ
Atụmatụ maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na Tinder na ndị ọzọ Mobile égwu